Ukushona kwelanga - Thola izindawo ezinhle kakhulu zokukujabulela | Ukuhamba kwe-Absolut
Ingabe ufuna ukujabulela enhle ukushona kwelanga? Ingesinye sezimo zemvelo ezihlaba umxhwele kakhulu okufanele usizakale ngaso sonke isikhathi. Ngalesi sizathu, noma kwesinye isikhathi singakunaki, kuyiqiniso ukuthi kunezindawo ezithuthukisa lezi zilungiselelo, ngoba zizobonwa njengemibukiso emikhulu.
Kukho konke lokho okubandakanya, senza ukukhetha kwefayela le- izindawo ezihamba phambili emhlabeni futhi phakathi kwawo sithola amaphuzu wezwe lethu, nathi okungafanele sikushaye indiva. Bhala phansi lezi zindawo ezilandelayo ngoba zonke zizokushiya nezikhathi ezikhetheke kakhulu!
1 Kungani ukushona kwelanga kuziswa kangaka?
2 Izindawo ezinhle kakhulu emhlabeni ukujabulela ukushona kwelanga
2.1 I-Mount fuji
2.3 USanta monica
2.6 Ugwadule lwaseThar
3 Izindawo ezinhle kakhulu zokubuka ukushona kwelanga noma ukushona kwelanga eSpain
3.1 IMirador de San Nicolás
3.2 Ipaki yaseGuell
3.3 IGallocanta Lagoon
3.4 IFinisterre, ukushona kwelanga okukhethekile
3.5 IPunta Orchilla Lighthouse
Kungani ukushona kwelanga kuziswa kangaka?
Ngenye yezikhathi lapho isuka khona kuvalelisa usuku futhi kanjalo, ilanga liyashona. Ngakho-ke, ngenkathi ukukhanya kwayo kuhamba noma kwehla, kuzokwakha indawo yemilingo ngenxa yenhlanganisela yemibala. Kokubili engxenyeni yezulu nasemhlabeni. Ngakho-ke ukukhanya okudala kakhulu kuzohlala kwenzeka. Okuthile esikufunayo nesikudingayo ukuze singafi. Ngakho-ke, futhi kuyisimo sothando kakhulu nesokuphumula. Njengoba wonke umuntu ezokujabulela ngentando.
Izindawo ezinhle kakhulu emhlabeni ukujabulela ukushona kwelanga
Yindawo ephakeme kakhulu kulo lonke elaseJapane, yingakho isibe olunye lwezimpawu ezinkulu zendawo. I- intabamlilo Kukhuthaze imisebenzi eminingi nokuthi kungenzeka kanjani ukuthi ibe ncane, futhi ingenye yezindawo lapho ukushona kwelanga kungakholeki khona kakhulu. Njengoba ilanga libonakala lingena e-volcano futhi lizodala ukuphela kwemithunzi ebomvu njengolaka.
Ngesimo sezulu esingavamisile ukuwela ngaphansi kuka-25º, sizophinda futhi sibe nenketho engcono yokujabulela ukushona kwelanga okugcwele. Ngaphezu kwalokho, izithombe ziyazikhulumela, kepha ukuhlanganiswa kwamathoni e-orange anombala oluhlaza okwesibhakabhaka nokuhlaba umxhwele amabhishi, njalo kusenze sibhekane nenye yezindawo ezipharadesi kakhulu.
Kuyiqiniso lokho Amabhishi aseSanta Monica kungazwakala kithi kusuka ochungechungeni olungajwayelekile noma kumamuvi. Kepha udumo lwayo luyaqhubeka futhi ukuthi ukushona kwelanga nakho kwesinye sezikhathi zomlingo kakhulu. Ngasohlangothini lwesikhumulo semikhumbi, ngezinto ezikhangayo ezifana nesondo elibukhali iFerris, kuzokwakhiwa isimo esingaphezu kokuhlaba umxhwele.
Siya manje kuze kube ENingizimu Afrika ukwazi ukukhuluma ngezwe lalo lesibili elinabantu abaningi okungekho elinye ngaphandle kweKapa. Yize idume ngendawo yetheku, lapho iphinde ixhunyaniswe nokushona kwelanga. NgoMeyi nango-Agasti bazongena ebusika, ngakho-ke kungakuhle ukuthi uvakashele ehlobo ukujabulela ukuhlanganiswa kombala okuhlaba umxhwele.
Kule ndawo kwenzeka okucishe kufane neNtaba iFuji okungukuthi, leyo nhlanganisela yokushona kwelanga ibonakala kuyo futhi izokwakha indawo enomlingo ochichimayo. Uma kukodwa, indawo iyamangalisa ngaleyo nhlanganisela yama-Persian, amaSulumane noma amaTurkey phakathi kwabanye, i- ukuba ubusuku Iyinika ubuhle obungaqondakali, kufanele nje uyiphile.
Le ndawo yaziwa nangokuthi enkulu ugwadule lwaseNdiya. Yindawo ebanzi impela esukela engxenyeni esenyakatho-ntshonalanga yeNdiya iye engxenyeni esempumalanga yePakistan. Inezimila ezithile nezindawo ezinamadwala. Ungachitha ubusuku kuyo, njengoba kukhona ukuvakasha kwale njongo. Ngakho-ke, uzokwazi ukubona ukushona kwelanga bukhoma futhi kuqondile, ngenkathi ujabulela umuzwa oyingqayizivele.
Sengathi bekuyi-movie, besingeke siqede ngaphandle kokukhuluma ngalokhu park eKenya. Yindawo evikelekile eyi-savanna lapho kuhlala khona zonke izinhlobo zezilwane. Ngalesi sizathu, izithombe ezijwayelekile zomhlaba we-cinema ziyafika engqondweni. Kepha buqamama sizophinde sijabulele ukuvaleliswa yilanga okusishiya siyindilinga enkulu emkhathizwe.
Izindawo ezinhle kakhulu zokubuka ukushona kwelanga noma ukushona kwelanga eSpain
IMirador de San Nicolás
Siya eGranada kanye ne- Alhambra Ngemuva, singabona okunye kokushona kwelanga okukhetheke kakhulu. Ngaphandle kokungabaza, akunakuphikwa ukuthi ukuyiphila kuhluke ngokuphelele kunendlela esingayilandisa ngayo. Ukuhlanganiswa kwemibala nokuthintwa kobuhle kuyahambisana endaweni enjengale.
Este paki ukuthi siseBarcelona futhi sinelinye lamalungelo amakhulu. Ngaphandle kokuthi iyamangalisa yodwa nazo zonke lezo zakhiwo zokwakha, ngeke iyeke ukukhanya lapho ilanga lishaya. Ukuhlanganiswa kwemibala efakazelwa lapho kuyamangalisa ngempela.
Lona indawo yemvelo I-Aragon neZaragoza ingenye yezindawo eziyizimpawu kakhulu. Ingelinye lamachibi amakhulu eSpain. Yize zingenazo izinhlanzi, kujwayelekile ukubona ukuthi izinyoni zihlangana kanjani endaweni. Ngakho-ke, bona, kanye nendawo nokuhlwa, benza inhlanganisela ekhetheke kakhulu ukubheka.
IFinisterre, ukushona kwelanga okukhethekile
Ku isifundazwe sase-A Coruña. EGalicia, sithola izindawo ezinhle zokubuka ukushona kwelanga. Kepha okunye okuvakashelwe kakhulu kulokhu iphuzu ebelithathwa njengelasentshonalanga kakhulu, lapho umhlaba waphela khona yingakho negama lawo. Ngokubukwa okuhle kolwandle, umbukiso ngeke ube mncane.
IPunta Orchilla Lighthouse
Lesi sikhathi sifika kuso El Hierro futhi ikakhulukazi kwenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu kusukela ezikhathini zasendulo. ngakho-ke bekungeke kuphunyuke ekubeni elinye lamakhona akhetheke kakhulu ukukwazi ukuvalelisa usuku. Umlingo osunguliwe awulandeki futhi ujabulisa kakhulu.
Sikhuluma ngepaki futhi, kepha kuyiqiniso ukuthi phakathi kokuhlanganiswa kwe- amaxhaphozi kanye nezilwane ezitholakala endaweni enjalo, ikumema ukuba uphumule futhi ujabulele umzuzu oyingqayizivele. Akumangazi ukuthi kungesinye sezikhathi lapho abantu abaningi bevame ukusondela.
Kuyinto a isiqhingi esiseduze kakhulu ne-Ibiza nelinye lamakhona esingeke silibale. Ungayibona kusuka ezindaweni ezahlukahlukene, ngoba ukufika esiqhingini, ungayifinyelela kuphela ngolwandle. Yize kufanele kuthiwe ubuhle bayo bukhona ukuthi noma iliphi ikhoneni eliseduze ungawujabulela lowo mzuzu omuhle esishilo. Kunezindawo eziningi ezengeziwe zokujabulela ukushona kwelanga eSpain, yini eyakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukushona kwelanga
Yini ongayibona eJapane